ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပရာ့ဂ်မြို့တွင် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပရာ့ဂ်မြို့တွင် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း
(၆-၉-၂၀၁၉ ရက်၊ ပရာ့ဂ်မြို့)
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ပရာ့ဂ်မြို့အခြေစိုက် ASEAN Committee Prague (ACP) က ကြီးမှူးကျင်းပသော အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ်ဧည့်ခံပွဲကို ၅-၉-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၆၃၀ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ကေသီစိုးသည် ပရာ့ဂ်မြို့တွင် ရုံးစိုက်သော အာဆီယံနိုင်ငံ သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ နှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ပရာ့ဂ်မြို့ အာဆီယံကော်မတီ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော ထိုင်းသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Ureerat Chareontoh နှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဌာန အကြီးအကဲ H.E. Ms. Eliska Zigova တို့က မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့ကြပြီး မိန့်ခွန်းတွင် ပရာ့ဂ်မြို့ အာဆီယံကော်မတီ၏ ဆဋ္ဌမမြောက် အဖွဲ့ဝင်သစ်ဖြစ်သော မြန်မာသံရုံးနှင့် သံအမတ်ကြီး ဒေါ်ကေသီစိုးအား ကြိုဆိုကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့ကြပါသည်။ ဧည့်ခံပွဲသို့ ဖိတ်ကြားထားသည့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပရာဂ်မြို့အခြေစိုက် သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့် သံတမန်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များအား အာဆီယံသံရုံးများမှ ရိုးရာအစားအသောက်များဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြပြီး ယဉ်ကျေးမှုအကအလှများဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ရာတွင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာကျောင်းသူနှစ်ဦးက ရိုးရာအက အလှတို့ဖြင့် ပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။